Ọtụtụ puku tọrọ atọ ka ụgbọ elu ụgbọ elu na -akwụsị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụgbọ elu 300
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ọtụtụ puku tọrọ atọ ka ụgbọ elu ụgbọ elu na -akwụsị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụgbọ elu 300
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
American ụgbọ elu kagburu ihe karịrị ụgbọ elu 500 na 782 ọzọ na -egbu oge n'ihi oke ikuku na ngwụsị izu na "nsogbu ịma aka."
Ndị njem tọrọ atọ na ọdụ ụgbọ elu Fort Lauderdale, Miami, Houston na San Juan.
Airlines Airlines kagburu ụgbọ elu 261 taa.
Airlines ụgbọ elu egbuola ụgbọ elu 120 taa.
Ọtụtụ puku ndị njem tọrọ atọ taa n'ọdụ ụgbọ elu dị na Fort Lauderdale, Miami, Houston, na San Juan na Puerto Rico, mgbe Linegbọ elu mmụọs kagbuo ma ọ bụ yigharị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụgbọ elu 300.
Dị ka nkwupụta ụgbọ elu si kwuo, "ọtụtụ nsogbu ihu igwe na ihe ịma aka ọrụ" akpatala ọgba aghara njem.
Ndị njem kwuru na -echere awa echere n'ahịrị maka nkwụghachi na enyemaka ndị ahịa ndị ọzọ n'ọdụ ụgbọ elu. Ụfọdụ ndị njem tọrọ atọ na -ama ụlọikwuu.
Association of Attendants-CWA weputara nkwupụta, na-ekwu na “mgbanwe ọnwa agbanweela,” na nkwụsị IT, yana ihu igwe, nwere ike nyere aka na ọdịda nke ụgbọ elu Spirit.
Ndị na-ebu US agbasiwo mbọ ike idobe ọkwa ndị ọrụ mgbe COVID-19 belatara uru.
Ndị ụgbọ elu Florida nke dabeere na Florida akagbuola ụgbọ elu 261 na ụgbọ elu 120 egbuola Mọnde dịka elekere 2:30 nke abalị ET.
O doro anya, ụgbọ elu Spirit adịghị anya naanị ụgbọ elu na -alụ ọgụ ụnyaahụ na taa.